Puntland oo go,aano adag dul dhigtay Madaxda dowladda fadaraalka Soomaaliya (dhegayso) – Radio Daljir
Diseembar 29, 2018 10:48 b 0
Shir ay isgu yimaaden maanta Gudiga Amniga ee dorashada Puntland ayaa waxa ay ka soo saareen go,aano adag oo deegaanada Puntland loga mamnucayo in ay yimaadaan madaxdax ka socota dowladda Soomaaliya meeqaam kasta halahaadee.
Go,aanada ka soo baxayu gudiga ayaa ahaa mid looga hortagayay in doorashada Puntland ay dowr ku yeelato Madaxtoyada Soomaaliya .
Siyaasiyiinta laga mamnuucay Puntland ayaa waxaa kamid ah Shaqaalaha dowladda Federaalka sida Wasiirada, Agaasimayaasha, Saraakiisha ciidanka iyo howlwadaneeda Madaxtooyada Soomaaliya.
Sidoo kale garoomada diyaaradaha iyo baraha Koontaroolada ayaa lga mamnuucay in aanay soo geli karin lacago kaash ah oo sharci darro ah, haddii ay soo gashana lala wareegi doono.
Shirkadaha Diyaaradaha imaanaya Puntland ayaa waxaa lafaray inay soo gudbiyana liiska dadka ay sidaan, inta aysan ka soo duulin garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Dhegayso Taliyaha guud ee Amniga doorashada Puntland .